Sihlehlisiwe isinqumo sokugunyaza imishado yabobulili obufanayo | News24
Hamilton - UNdunankulu owengamele indawo yaseBermuda ngoLwesithathu uqinisekise umthethosivivinywa wokuhlehlisa ilungelo eligunyaza abantu bobulili obufanayo ukuba bashade.
Lesi sinqumo siphikisana nesinqumo seSupreme Court esenziwa ngonyaka odlule esigunyaza imishado abobulili obubodwa.
Isinqumo sikandunankulu uJohn Rankin wakule ndawo eyisiqhingi esiyikhaya kwizicebi ezingu-60 000i uthathe isinqumo esingavamile, so kuhlehlisa imithetho efana nalena nokuyinto engajwayelekile emazweni aseNtshonalanga.
OLUNYE UDABA: Ingqophamlando ‘izitabane’ ziqabulana okokuqala kokamabonakude
Lo mthetho ungaphansi kwe-Domestic Partnership Act 2017, wagunyazwa esishayamthetho saseBermuda uthi noma ngabe yisithi isakhamuzi saseBermuda sinelungelo lokwakha ubudlelwano basekhaya ngokwamalungelo afanayo ngokusho kukahulumeni.
Izithandani zobulili obubodwa ezashada ngaphambi kokuhlehliswa kwalo mthetho zizohlala zishadile.
Lesi sinqumo sigxekwe kabi yizinhlangano zamalungelo abantu emhlabeni.
Lezi zinhlangano ziphume umkhankaso wokunxusa uRankin kanye noBoris Johnson oyiBritish Foreign Secretary ukuba basihoxise lesi sinqumo.